गायक बस्‍नेत र संगीतकार गुरुङ सम्मानित- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — गायक कुमार बस्नेत र संगीतकार प्रकाश गुरुङ सम्मानित भएका छन् । 'भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय संगीत सम्मान २०७७' बाट उनीहरु सम्मानित भएका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा शिरोमणि भक्तराज आचार्यले, भक्तराज आचार्य संगीत प्रतिष्ठानको तर्फबाट दुवैजनालाई नगद ५० हजार एक रुपैयाँसहित सम्मान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कुमार बस्नेतले संगीत क्षेत्रमा रोयल्टीको समस्या रहेको बताए । संगीतकार लक्ष्मण शेष रोयल्टीको यसै समस्याको समाधानका लागि स्रष्टाहरु कानुनी प्रक्रियामा जान तयार रहेको बताए । 'गीत संगीतको क्षेत्रमा केही धमिराहरु, माफियाहरु र केही फटाहाहरुले स्रष्टालाई जानकारी नदिइ उनीहरुले गाएका गीतहरु विश्वका सयौं पोर्टलमा बेचेर स्रष्टालाई शोषण गरिरहेको अवस्था छ । अहिले हामी केही स्रष्टाहरु मिलेर यो शोषणविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । राजन इसान र प्रमोद खरेलले मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी प्रकृया अगाडि बढाइसकेका छन्,' उनले भने ।
म्यूजिक कम्पनीहरुले वर्षको एक पटक सम्मान दिएर स्रष्टालाई रोयल्टीबारे नबोल्न लोभ्याइरहेको उनी बताउँछन् । 'स्वच्छ मनले गरेको भक्तराज आचार्यलगायतको अन्य सम्मान लिँदा हुन्छ । तर माफियाले वर्षको एक पटक सम्मान दिएर स्रष्टाको मुख थुनिदिने प्रयास गरेको छ,' शेषले भने, 'त्यस्ता शोषकहरुले फकाउन गरेको सम्मानलाई स्रष्टाले बहिष्कार गर्नुपर्छ । तपाईंले आँट गर्नुभयो भने रोयल्टीको यो विवाद समाधान हुन्छ ।'
कार्यक्रममा गायक स्वरुपराज आचार्य, सत्यराज आचार्य र रञ्जित नेपालीले सांगीतिक प्रस्तुति दिए ।
कार्यक्रममा गायक प्रमोद खरेल, निर्देशक प्रकाश आङ्देम्बेलगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ २०:४२
जब राज्यले सीमा नाघेर जनतालाई संकटमा पार्छ, तब उनको कविता आफैं अघि सरेर बोल्छ
चैत्र १५, २०७७ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — मालिक !म यो गोरखा राज्यमा
अढाई सय वर्षपछि बौलाएँ
मेरो टाउको फन्फनी घुमिरहेछ
आँखा तिर्मिरतिर्मिर भइरहेछ
खोइ मेरो पाइताला कहाँनिर छ ?
अँध्यारोबाट जब मधुरो प्रकाश छरियो तब बिसे नगर्चीका स्वरहरू एकै लय, एकै स्वर र एकै विरहमा गुन्जियो । बिसे नगर्चीका स्वरहरूमा इतिहासले कुल्चिएको पीडा थियो, मालिकको मौनताप्रति प्रश्न थियो र आफ्नै हालतको बयान थियो । जसको अग्र भागमा आफ्नै शब्द–शब्दको साक्षी थिए, ‘बिसे नगर्चीको बयान’ कविताका स्रष्टा कवि श्रवण मुकारुङ ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जन्मिएको मुकारुङको उक्त कवितालाई विश्व रंगमञ्चको दिवसका अवसरमा शनिबार बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरले १२ औं सत्रका प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागितामा नाटकका रूपमा मञ्चन गर्‍यो ।
इतिहासमा एक जना मात्र नायक ‘बिसे नगर्ची’ लाई देखेका दर्शकले झन्डै एक दर्जनको हाराहारीमा उस्तै बिसेहरूलाई नजिकबाट नियाले । ‘मालिक ! म यो गोरखा राज्यमा अढाई सय वर्षपछि बौलाएँ,’ यिनै संवादहरूसँगै सुरु भएको दृश्यमा दर्शकहरूले एकै भेषमा उपस्थित बेसुरा बिसेहरूको रोदनलाई नियाल्ने मौका पाए । जहाँ बिसे नगर्चीहरू आफू जन्मेको मुलुकमा आफू राज्यको नागरिक हुनुको अस्तित्व खोजिरहेका थिए । नुनको सोझो गरी राज्यको पहरा दिएका बिसेहरू राजा र प्रजाको मुलुक खोज्दै आफ्नै माटोमा राष्ट्रियता खोज्दै भन्दै थिए, ‘मालिक † यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु, म कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छु ?’
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको शाही सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ‘स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन’ मा सुनाउन उक्त कविता जन्मिएको थियो । जन्मिएको डेढ दशकपछि कविता रंगमञ्चमा उत्रिएको देख्दा मुकारुङ केही उत्साहित र गम्भीर देखिन्थे । हुन त उनले यही कवितालाई हालसालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै सुनाएका पनि थिए । तर कविताले रंगमञ्चसम्मको यात्रा तय गर्ला भनेर उनले सोचेका थिएनन् ।
इतिहासमा नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहको सल्लाहकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका एक नायकका रूपमा बिसे नगर्चीलाई लिइन्छ । उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई संकटमा समस्या समाधान र आर्थिक जोहोका लागि महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिएर अगाडि बढ्न हौसला दिएका थिए । दलित जातिका तिनै नायकलाई राज्यले बिर्संदै गएको भान भएपछि मुकारुङले बिसे नगर्चीलाई ब्युँताउँदै उक्त कविता रचना गरेका थिए ।
२०६२ सालमा नेपाल आर्ट काउन्सिल हुँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म मुकारुङको कविता गुन्जिँदा तीनताक यसले जनआन्दोलनको नाराको रूप लिएको थियो । जहाँ कविले इतिहासका नायक बिसे नगर्चीमार्फत दलित, विपन्न, पिछडिएको, उत्पीडित, शोषित र राज्यले पछाडि पारेका जनताको समग्र आवाजलाई उठान गरेका छन् ।
आज पनि मुकारुङको कविताको उचाइ उत्ति नै छ । यसपछि उनले अरू कविताहरू रचना नगरेका भने होइनन् । जब राज्यले सीमा नाघेर जनतालाई संकटमा पार्छ, तब उनको कविता आफैं अघि सरेर बोल्छ । ‘भलै समय फेरियो, राज्य सत्ता र व्यवस्था फेरिए तर अवस्था फेरिएको छैन,’ यस्तै गुनासो गर्छन् मुकारुङ । उनलाई लाग्छ, उनको कविता आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् । रंगमञ्चसम्मको अवतरणमा आफ्नो सिर्जनाले नयाँ क्षितिज र आयामहरू पाएकामा मुकारुङ खुसी छन् । उनको कविताले सिर्जनात्मक अर्काे स्पेसका रूपमा अगाडि यात्रा तय गरेको छ । समयले कोल्टे फेरे पनि कवितालाई आजको पाठक तथा दर्शकले उत्तिकै रुचाएका छन् । यसमा उनी समाज, राज्य र राजनीतिक व्यवस्थातिर इंगित गर्दै भन्छन्, ‘राजनीति र समाज धिमा भएको छ ।’
केही महिनाअघि निकुञ्ज संरक्षणको नाममा चितवन कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीलाई राज्यमार्फत नै जलाइएको थियो । गत महिना मात्र दैलेख निमायलकी सुकी बडुवाल सन्तानसहित कर्णालीमा बगिन् । निर्मला, सम्झना, भागरथीहरूको बलात्कारपछि हत्या भयो । यसैबेला बिसे नगर्ची फेरि बहुलाउँछ ,‘नाथे मेरी स्वास्नी न हो मारिएकी, नाथे छोरी न हो बलात्कृत भएकी, नाथे यो बिसेको झुप्रो न हो जलाइएको, यतिमै यो बिसे उफ्रिनुपर्ने थुइक्क बिसे... !
कविताका प्रत्येक हरफका संवादसँगै नाटकका दृश्यहरू हेर्दै गर्दा आम दर्शकको मनमा प्रश्न उठ्छ, ‘आफ्नै रगतले सिञ्चिएको माटोमा पहिचानकै लागि अझै यो राज्यमा कति जना बिसे नगर्चीहरू बहुलाउँदै कतिन्जेल बयान दिइरहनुपर्छ ?’
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ २०:३८